भुईकटहर खानुका यस्ता छन् चमत्कारी फाईदा – Enepali News
गर्मी सुरु भएसगै बजारमा देखिने भुईंकटहरले जसको जिब्रो पनि रसाउँछ । यो वास्तवमै निकै उपयोगी फल हो । यो भिटामिन सीले भरपूर हुन्छ र जसले शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ । यसलाई सलाद तथा डेजर्टका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । भुईंकटहरमा भिटामिन सीका अतिरिक्त क्याल्सियम, फाइबर पनि पाइन्छ । यसमा निकै कम मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुन्छ । यसमा पाइने इन्जाइमले खाना पचाउन सहयोग गर्छ । काँचो भुईंकटहरभन्दा पाकेको बढी पौष्टिक हुन्छ । यसमा अन्य फाइदा के–के हुन् त ?
१. भुइँकटहरमा ब्रोमेलेन नामक तत्व हुन्छ, जसले सरीरलाई क्यान्सरबाट बचाउन सहयोग गर्दछ ।
२. भुइँकटहरमा पर्याप्त मात्रामा म्याग्नेसियम, क्याल्सियम जस्ता लवण पाइन्छ जसले हड्डीलाई मजबुत राख्नमा सहयोग गर्दछ ।
३. भुइँकटहरमा क्यालोरी कम मात्रामा हुन्छ र यसमा चिनीको मात्रा पनि कम हुन्छ । मधुमेहका रोगीले पनि भुइँकटहरको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
४. मुटु सम्बन्धि विभिन्न रोगबाट ग्रसित मानिसहरुका लागि भुइँ कटहरको सेवन लाभदायक हुन्छ । उच्च रक्तचाप तथा मुटुरोगको जोखिम कम हुनुका साथै रोगीलाई समेत फाइदा हुन्छ ।
५. भुइँ कटहरमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ जसले पाचन क्रियालाई सहज बनाउँछ र खानेकुरा सजिलो सँग उपापचयन हुन्छ । भोक कम गर्ने हुँदा मोटोपना घटाउन समेत भुईकटहरले सहयोग गर्छ ।
६. यसमा हुने प्रोटिनले छालालाई चम्किलो बनाउँछ । भुइँ कटहरले अनुहारका दाग धब्बा तथा चाउरीपना कम गर्न सहयोग गर्छ ।
७. भुइँकटरहमा हुने यी लगायत भिटामिन सी जस्ता तत्वहरुले जिउको रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्न सहयोग पुराउँछ ।
थप फाईदा :
१. तौल कम गर्छ
यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ । क्यालोरीको मात्रा पनि कम हुन्छ । यसलाई काटेर खाँदा या जुसको रुपमा पिउँदा सबै खालका पोषक तत्व पाइन्छ र थप क्यालोरी पनि हुँदैंन । यदि तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने नियमित रुपमा भुईंकटहरको सेवन र हरेक बिहान शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ । जुसको साटो फल खानाले फाइबर पनि प्राप्त हुन्छ । यसले क्यालोरी कम गर्न र खाना पचाउन मद्धत गर्छ ।
२. हड्डी मजबूत बनाउँछ
यसमा प्रचुर मात्रामा म्याग्नेसियम पाइन्छ । यसले शरीरको हड्डी मजबूत बनाउनुका साथै उर्जा दिन्छ । एक कप भुईकटहरको जुस पिउँदा दिनभर शरीरलाई आवश्यक म्याग्नेसियमको ७३ प्रतिशत मात्रा पूर्ति गर्छ ।
भुईंकटहरको जुस पिउनाले सूजनमा पनि कमी आउछ । यसमा मिनरल्स, भिटामिन बी, सी, के, फोलेट, कार्बोहाइड्र«ेट, चिल्लो, क्याल्सियम, फोस्फोरस तथा स्वस्थकर इन्जाइम पाइन्छ । यसमा पाइने ब्रोमिलेन शरीर सुन्निने समस्यामा फाइदाजनक हुन्छ ।
यसमा भिटामिन सी तथा बी र सेलेनियम पाइन्छ । यी सबै तत्वले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउँछ । रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्दा शरीर विभिन्न खालका भाइरसबाट लड्न सक्षम हुन्छ । यसका कारण इन्फेक्सनको सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
भुईंकटहरमा भएको विशेष गुणका कारण आँखाको शक्तिका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसमा पाइने भिटामिन ए आँखाको शक्तिका लागि आवश्यक भिटामिनका रुपमा लिइन्छ । भुईंकटहरमा पाइने एन्टीअक्सिडेन्टले क्यान्सरको खतरालाई पनि कम गर्छ ।
६. डिप्रेसन कम गर्छ
यसमा पोटासियम र सोडियम पनि पाइन्छ, जसले हाइपरटेन्सनलाई पनि कम गर्छ । यदि डिप्रेसनको समस्या छ भने भुईंकटहरको जुस नियमित पिउनाले फाइदा मिल्छ । यसमा भएको इन्जाइमले खाना सजिलै पच्न सहयोग गर्छ ।
Prevनेपालले सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्दै
Nextकाठमान्डौ छिर्न अब कठिन